Soomaaliya, 12 March 2018
Isniin 12 March 2018
Farmaajo oo ka Hadlay Furitaanka Kalfadhiga Baarlamaanka
Madaxweyne Farmaajo ayaa furitaanka kalfadhigga baarlamaanka uga digay shirkaddaha shisheeye inay maalgashi sameeyaan iyagoon oggolaansho ka heysan dowladda dhexe. Dhinaca kale, Somaliland ayaa sheegtay inay hakisay wadahadaladii u qorsheysnaa inay dhex maraan iyada iyo Dawladda Federaalka ee Somalia
Barnaamijka Dhacdooyinka ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa qoddobo uu ka mid yahay heshiiska dekedda Berbera ee dhex maray Somaliland, shirkadda DP iyo Ethiopia.
Madasha: Wareysiga Fannaan Cabdi Baaddil, Qeybtii 3-aad
Ku soo dhawaada dhageystayaal Barnaamijka Madasha Dhallinyarada ee VOA. Toddobaadkan waxa barnaamijka marti ku ah fannaanka Cabdi Baaddil Ibraahim, oo ka mid ahaa fannaaniinta ugu caansan Soomaaliya.
Ethiopia iyo Imaaradka oo Heshiisyo Kala saxiixday
Dalalka Ethiopia iyo Imaaradka ayaa dhawaan kala saxiixday heshiisyo dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga, kuwaasi oo saamayn ku yeeelan kara dalalka Geeska Africa.
Dowladda Soomaaliya oo Ka Dacwootey DP World
Dowlada Soomaaliya ayaa toddobaadkan u gudbisey fadhiga golaha wasiirada ee Jaamacadda Carabta waraaq ay ashtako uga tahay Emirat Carabta oo shirkad laga leeyahay heshiis saddex geesood ah dekeda Berbaro lagashey Somaliland iyo Itoobiya.